Miezaka Mafy” ny Ekipa Jamaikana ho an’ny baolina kitra Reggae Girlz hametraka tantara · Global Voices teny Malagasy
Miezaka Mafy” ny Ekipa Jamaikana ho an'ny baolina kitra Reggae Girlz hametraka tantara
9 Jona, lalao fanombohany ny Fiadiana Tompondaka Erantany, ifanandrina amin'i Brezila
Voadika ny 22 Jona 2019 14:34 GMT
Pikantsarin'ny lahatsary iray tanaty Youtube an'ilay ekipa Jamaikana Reggae Girlz nandritra ilay lalao ara-pirahavaviana iraisam-pirenena talohan'ny Fiadiana ny Amboara Erantanin'ny Baolina kitra nifanandrinany tamin'i Panama ny 19 May 2019. Nandresy tamin'ny isa 3-1 i Jamaika
Tonga ao Frantsa ilay ekipa vehivavy Jamaikana mpilalao baolina kitra, Reggae Girlz, hiady ny Amboara Erantanin'ny Baolina kitra vehivavy an'ny FIFA 2019. Eo amin'ny faha 53 ny kilasy misy azy maneran-tany, ary ny 9 ona, hisantatra ny fandraisany anjara voalohany hifanandrina amin'i Brezila, izay faha 10 izao ny toerana misy azy, ilay ekipa vehivavy miìtovy amin'ny Reggae Boyz. Tsy lalao tsy ara-potoana no hitranga, fa dia tonga ny Reggae Girlz — nampahafantatra ny fahatongavany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena — izay tena dingana mendri-piderana tokoa .
Nanomboka ny taona 1991 ny tantaran'ilay ekipa, fony niatrika ny lalao iraisam-pirenena voalohany nifanandrinany tamin'i Haiti, ka resy 1-0. Na teo aza izany andrana voalohany izany — sy ireo sakana sarotra vitsivitsy nandritra ny folo taona manaraka — niakatra tsikelikely ny Regage Girlz ka izy izao no ekipa vehivavy Karibeana voalohany tonga eo amin'ny Fiadiana ny Amboara manerantany ao amin'ny tantara.
Nahaloa ny latsakemboka tokony naloany ry zareo. Amin'ny maha-ligy vehivavy niady mafy nandritra ny taona maro azy ireo mba hahazoana fanohanana kely, tsy nisy mpiahy tanteraka io ekipa nasionaly io tamin'ny 2008 rehefa nilaza ho tsy ampy ho enti-manana ny Jamaica Football Federation (JFF) – Federasionan'ny Baolina Kitra ao Jamaika.
Avy eo, ny taona 2015, nisy mpanavotra tsy nampino : Cedella Marley, izay ny rainy, Bob, moa dia fantatra fa mpankafy manokana io lalao io, nahatsapa ny fijalian'ny Reggae Girlz ary nandresy lahatra ilay mpanazatra Hue Menzies monina ao Florida mba hirotsaka an-tsitrapo hanampy azy.
Taorian'ilay fanentanana tsy nahomby momba ny Fiadiana ny Amboara Erantanin'ny baolina kitra ny taona 2015, izay nitondra nankamin'ny fandravana ny ligin'ny vehivavy ny taona manaraka an'io, nandray an-tanana azy indray i Menzies ny taona 2018, niaraka tamin'ny fanohanana feno avy amin'i Marley. Mba hahatafita azy ho ao anatn'ny fifaninanana 2019, noresen'ny Girlz i Panama, tamin'ny alalan'ny daka baolina mivantana.
Ampahany tamin'ny faharisihan'i Menzies ny fanovàna ny fomba fijerin'ny olona ao an-toerana manoloana ny vehivavy mpilalao baolina kitra :
Noraisiko ilay tetikasa, tsy any amin'ny resaka baolina kitra loatra fa kosa ho andrana hijerena raha afaka manova ny fomba fisainan'ny olona manoloana ireo vehivavy milalao baolina izahay. Ao amin'ny kolontsainay, manao hazakazaka ary milalao netball ny vehivavy ary heverin-dry zareo [amin'ny ankapobeny] fa natao ho an'ny lehilahy mahantra ny baolina kitra ka tsy hitan-dry zareo hoe afaka hanao baolina ny vehivavy. Izay no tena nandraisako ilay asa. Indraindray rehefa manao zavatra amin'ny tanjona hafa ianao, msy zavatra tsara miseho.
Taorian'ny nanatrehany ny lalao farany nataon'ny Girlz tao Jamaika talohan'ny nandehanany ho any Frantsa, nandefa bitsika nilaza ny fanohanany i Marley, Tale Jeneralin'ny Tuff Gong International sy ny Bob Marley Fondation.
Fotoana nahafinaritra ery tamin'ny lalao farany @ReggaeGirlzJA talohan'ny nandehanana any amin'ny Fiadiana ny Amboara maneran-tany…ary FANDRESENA hafa indray ! #CHO #StrikeHard #Herstory #FootballisFreedom@nanaritamarley @BobMarleyFND @alacrangroup pic.twitter.com/7fE4ov4q1S
— Cedella Marley (@cedellamarley) 24 May 2019
Nanamarika ny pejy Facebook iray momba ny Baolina kitra nanao hoe :
Tsy ho firenena Karaiba tafakatra voalohany ho any amin'ny Fiadiana ny Amboara Manerantany ho an'ny baolina kitra mihitsy ny Reggae Girlz raha tsy teo ny fanampian'i Cedella Marley.
Nampidirina ao anatin'ny lalao an-dahatsary ofisialin'ny FIFA 2019 ilay ekipa ary manana ny sarimbiby amantarana azy manokana ihany koa :
Dika mitovy amin'ilay saribakoly “patois TALKING JAMAICAN ” voalohany ilay “Biby famantarana REGGAE TOYA” izay noforonina mba hahafahan'ireo ankizy mainty hoditra hahatsapa tena ho manana ny maha-izy azy ary ho tia ny tenany sy hirehareha ny aminy. Isaorana ny Zuree Dolls amin'ny fiarahamiasa amin'ny Fikambanana ho fanohanana ny Baolina kitran'ny Vehivavy ao Jamaika. pic.twitter.com/lB2yVuupPH
— Reggae Girlz Foundation (@Reggae_Girlz_F) 1 Jona 2019
Manomboka manamafy ny fanantenan'ny Reggae Girlz ny governemanta Jamaikana amin'izao ekipany tafita sy tafakatra ambony izao. Nandefa bitsika toy izao i Andrew Holness, Praiministra Jamaikana :
Hanao ny lalaony voalohany amin'ny Fiadiana ny Amboara eran-tany ho an'ny Baolina Kitra ny Reggae Girlz ny 9 Jona 2019. Miarahaba ny Reggae Girlz aho tamin'ny fandresen'izy ireo nampitolagaga ary mandrisika ny Jamaikana rehetra hanohana io Ekipa io . pic.twitter.com/dPU9AJkKd9
— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 31 May 2019
Eo ambany fitantanan'i Menzies, efa samy nilalao nanamafy ny traikefany tany aminà klioba Eraopeana avokoa ireo mpikambana ao amin'ny Girlz, na dia mbola mpianatra sy mpilalao any Etazonia aza ny ankamaroany. Mbola mpianatra amin'ny Lisea ny mpikambana iray izay tena andrandraina ao aminy i Jody Brown avy any ambanvohitr'i Lime Hall, Jamaika.
Vetivety dia nahazo ny toeran'ny olo-malaza tao Jamaika ihany koa ilay mpanafika ao amin'ny Statuesque Khadijah “Bunny” Shaw, Mpanao Baolina Mendrika ny Taona 2018 avy ao amin'ny UK Guardian. Teraka tao amin'ny tanàna mafy ady iray tao Spanish Town, lehibe tao aminà fianakaviana maro anaka iray, nianatra nilalao baolina niaraka tamin'ny lehilahy, tongotra tsisy kapa teny amin'ny arabe. Namoy anadahy 3 izy noho ny herisetra mitam-piadiana, kanefa nanohy ny fianarany ihany ary vao nahazo ny diplaomany tao amin'ny Oniversite an'i Tennessee.
Na eo aza izany tantara manainga fanahy izany, mipetraka foana ilay fanontaniana : Inona no hitranga aorian'ny Fiadiana ny Amboara erantany ho an'ny baolina kitra ?
Haharitra ve ny Baolina kitra Vehivavy ao Jamaika (sy any amin'ny faritra Karaiba amin'ny ankapobeny)? Hanao dingana amn'ny fanohanana amin'izay ve ireo mpanohana ao an-toerana, na ahoana na ahoana ny valiny ho azo ao Frantsa ? Mbola hijanona anaty fientanentanana be mikasika ny Girlz ihany ve ny vahoaka Jamaikana sa hanjavona izany hafaliana izany ?
Niezaka nanao fitadiavam-bola anaty aterneto i Cedella Marley , mbola laharam-pahamehana ihany aloha ny faharetan'ny baolina kitra vehivavy
Na inona zavatra miandry amin'ny ho avy, hankafy izao herinandro manaraka amin'ny fifaninanana izao ireo Jamaikana. Misy amin'ireo mpankafy vaovao ny Reggae Girlz no nameno ny valiziny mba handeha hanofahofa ny saina Jamaikana any Frantsa, raha toa ny sasany ka handrisika azy ireo anaty fiaretan-tory karakaraina any amin'ireo fiarahana mijery anaty efitrano fandraisam-bahiny, trano fisotroana natao ho an'ireo mpitia fanatanjahantena ary ireo klioba manerana ny nosy ary any amin'ireo mpila ravinahitra
Misy hira natao hanohanana ilay ekipa mihitsy aza, ny fiverenana manao hoe “Asio mafy!”
Izany indrindra no tena andrasan'ireo mpanohana ny ekipan'ny Reggae Girlz ho ataon'izy ireo any Frantsa. Nanindrahindra mandrakariva ny ekipa mpilalao baolina kitrany lehilahy foana hatramin'izay ny Jamaikana, na dia tsy ampy fiaraha-mientana aza izy ireo hatramin'ny fiakarany tany amin'ny fiadiana ny amboara erantanin'ny baolina kitra ny taona 1998.
Ankehitriny, fotoana izao hijerena akaiky ny ekipa vehivavy indray. Noho ny ekipa Reggae Girlz, voasoratra ao anaty lisitry ny FIFA voalohany hatramin'ny taona 2006 i Jamaika ary manantena fa hampakatra avo ny faneva toy ny ekipa lehilahy izy ireo.